गण्डकी बैङ्कको पुस ७ बाट ४ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन | गृहपृष्ठ
Home लगानी गण्डकी बैङ्कको पुस ७ बाट ४ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन
गण्डकी बैङ्कको पुस ७ बाट ४ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन
मङ्सिर १९, काठमाडौं (अस) । गण्डकी विकास बैङ्कले ४ बराबर १ (४ः१) अनुपातमा पुस ७ गतेदेखि माघ ११ गतेसम्म हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दैछ । बैङ्कले शेयरधनीका लागि प्रति शेयर एक सय अङ्कित दरको ४६ लाख ९ हजार ८ सय १५ दशमलव ५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । दोस्रो बजारमा सोमवार रू. २ सय ७१ मा कारोबार भइरहेको बैङ्कको हकप्रद शेयर प्रतिकित्ता रू. १ सय अङ्कित दरमा खरीद गर्न पाइने छ ।
बैङ्कको मङ्सिर १४ गतेसम्म शेयर किन्ने वा शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरूले हकप्रद शेयरमा खरीदको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । हकप्रद शेयर खरीदका लागि बैङ्कको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, गण्डकी विकास बैङ्क चिप्लेढुङ्गा पोखराका साथै सम्पूर्ण शाखामा आवेदन दिन सकिन्छ ।
हकप्रद शेयर निष्कासन पछि बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ३० करोड ४९ लाख ७ हजार ७ सय ५० पुग्नेछ । गण्डकी विकास बैङ्कले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ५ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ । हाल बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ८४ करोड ३९ लाख रहेको छ